Hawl-galkii France oo la soo Afjaray
Masuuliyiinta dalka Faransiiska ayaa sheegay in labadii qof ee lagu eedaynayey inay ka dambeeyeen weerarkii lagu qaaday Wargeyska Charlie Hebdo in la dilay, sidoo kale waxaa la soo daayay la haystayaashii ay afduubka u haysteen ka dib hawlgalo kala duwan oo ciidanka Boolisku ay ka kala fuliyeen dhinaca woqooyi ee magaalada Paris iyo hawlgal kale oo ciidanka boolisku ay ka sameeyeen goob lagu dukaamaysto oo Iyana koox hubaysani ay dad ku afduubteen.
Qaraxyo iyo is-rasaasayn ayaa laga maqlayey goob ay ku yaalla xafiisyo wershadeed halkaas oo loo malaynayey inay ku dhuumanayeen labadii wiil ee walaalo ahaa oo lagu kala magcaabi jiray Cherif iyo Said Kouachi kuwaas oo loo aanaynayo weerarkii Wargeyska ee lagu dilay illaa 12 qof.
Ciidanka Booliska ayaa sidoo kale weerar la beegsaday goob laga dukaamaysto oo u dhow Porte de Vincennes, waxayna goobtaas ku dileen mid ka mida dablaydii hubaysnayd oo afduub ku hasytay illaa shan qof.
Warar is khilaafsan ayaa goobtan ka soo baxaya; kuwaas oo sheegaya inay baxsatay gabadh ka mid ahayd afduubayaasha iyada oo xilligan warbaahintu ay qorayso in la baadi goobayo.
In ka badan 88,000 oo ka tirsan askari ayaa ka qayb qaadanayey hawlgalkan lagu soo afjarayey weerarada kala duwan ee ka dhacay magaalada Paris.